Madaxweynaha Puntland oo safiir u magacaabay dalka Itoobiya. – Radio Daljir
Madaxweynaha Puntland oo safiir u magacaabay dalka Itoobiya.
Seteembar 24, 2016 2:14 b 0
Garoowe, Sep 24 2016—Digreeto kasoo baxday xafiiska madaxweynaha dowladda Puntland Dr Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa waxaa lagu magacaabay safiir cusub oo dowladda Puntland u fadhin doona magaalada Addis ababa ee xarunta dalka Itoobiya.
Madaxweynaha dowladda Puntland ayaa war qaddaan kasoo baxday xafiiskiisa waxaa lagu sheegay in Dowlada Puntiland ay u magacawday Sureer Abshir Muuse in ay noqoto Safiirka Dowlada Puntilnad u fadhiya dalka Itoobiya.
Dowladda Puntland ayaa xiriir wanaagsan laleh dalka Itoobiya, iyadoona ay ka wada shaqeeyaan dhinacyada, ammaanka, ganacsiga, waxbarashada iyo guud ahaan arrimaha Soomaaliya.
DHEGEYSO-Maamulka Khaatumo oo isku khilaafay shirka Balli-cad.
Akhri-Maxaa todobaadkii dhammaaday u qabsoomay xukuumadda Soomaaliya.